Ny seranam-piaramanidina Stuttgart dia mampiato ny asan'ny sidina manomboka ny 6 aprily hatramin'ny 22 aprily
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny seranam-piaramanidina Stuttgart dia mampiato ny asan'ny sidina manomboka ny 6 aprily hatramin'ny 22 aprily
Ny fanavaozana ampahany ny lalampanam-by Seranam-piaramanidina Stuttgart afaka manomboka aloha kokoa noho ny nomanina. Manomboka amin'ny Alatsinainy 06/04/2020 ka hatramin'ny Alarobia 22/04/2020 dia havaozina ny ampahan'ny fizaran-tany simenitra. Tsy hisy ny fiasan'ny sidina mandritra io dingana io. Hivily lalana ny sidina toy ny sidina mitondra entana miaraka amin'ny entana ara-pahasalamana na sidina famonjena. Hanomboka aorian'izay ny asa fanamboarana mahazatra ary haharitra hatramin'ny Alakamisy 23/04/2020 ka hatramin'ny Alarobia 17/06/2020. Mandritra io fotoana io, ny fifamoivoizana amin'ny rivotra dia afaka mitohy mifanitsy amin'ny asa fanamboarana.
Walter Schoefer, tale jeneralin'ny seranam-piaramanidin'i Stuttgart: "Ny fanombohan'ny fananganana teo aloha dia manome antoka antsika bebe kokoa amin'ny famitana ny fanavaozana amin'ny ampahany ara-potoana, na eo aza ny fiatraikan'ny areti-mandringana corona. Ny areti-mandringana koa dia mety hisy fiatraikany amin'ny mpiasa amin'ireo orinasa nifanekena sy ireo rojom-pamatsy. Noho ny fihenan'ny isan'ny mpandeha dia nanapa-kevitra izahay fa hanitsy ny drafitray ary hanomboka aloha ny asa fanamboarana, "hoy i Schoefer. "Ny fito ambinifolo andro mialoha ny fandaharam-potoana tsy misy fandidiana sidina dia ahafahan'ny manam-pahaizana manatanteraka maro amin'ireo asa sarotra amin'ny dingana lehibe kokoa".
Tale mpitantana Dr. Arina Freitag: “Ny fanombohan'ny fanombohana ny fananganana dia ahafahantsika manangana tsy an-kijanona. Izany dia manome antsika fitarihana manan-danja, indrindra amin'ny dingana fananganana voalohany, izay ahitàna asa sarotra be. Ho an'ny mpanjifanay, midika izany fa azo itokisana ny drafitra. Na eo aza ny areti-mandringana, dia manome toky izahay fa ny seranam-piaramanidina Stuttgart dia hiarina indray amin'ny 18 Jona 2020 ”.
Fanavaozana ny fihodinana am-piandohana amin'ny Stuttgart Airport - zava-misy sy tarehimarika:
Asa fananganana aloha:
Alatsinainy 06 aprily 2020 ka hatramin'ny alarobia 22 aprily 2020
Tsy misy sidina fifamoivoizana / famonjena ary sidina enta-mavesatra navily lalana
Dingana fananganana voalohany:
Alakamisy 23 aprily - alarobia 20 mey 2020
Ny halavany farany amin'ny halaviran-dalana 1,965 metatra
Ny fifamoivoizana an-habakabaka dia mitanjozotra amin'ny asa fanamboarana, saingy tsy misy sidina eo anelanelan'ny 10 alina sy 6 maraina
Dingana fananganana faharoa:
Alakamisy 21 Mey - Alarobia 17 Jona 2020
Ny halavany farany amin'ny halaviran-dalana 2,475 metatra
Ny fifamoivoizana an-habakabaka dia atao mifanandrify amin'ny asa fanamboarana
Amin'ny 18 Jona 2020, niverina tamin'ny halavany 3,345 metatra ny lalambe.